Inqubomgomo Yokulethwa | IJoopzy iyisitolo esikhulu kakhulu esiku-inthanethi iningi lezidingo zakho
Sithumela emazweni amaningi emhlabeni wonke, kuwo wonke amaphakheji asekhaya nakwamanye amazwe. Ngenkathi silwela ukuletha izimpahla ngohlaka lwesikhathi esichazayo, ngeke sikwazi ukuqinisekisa noma ukwamukela isikweletu ngokulethwa okwenziwe ngaphandle kwalesi sikhathi. Njengoba sincike ezinkampanini zokuthumela ezivela eceleni ukwenza lula ukulethwa kwamakhasimende ethu, asikwazi ukwamukela isikweletu ngokuphuma kwezindleko zephakethe noma ezinye izindleko ezitholwe ngenxa yokulethwa okulethile noma ukubambezeleka.
Yonke imiyalo izothatha cishe 3-5 izinsuku zebhizinisi ukucubungula. Isikhathi sethu sokuthumela sivame ukungaphakathi 7-10 izinsuku zebhizinisi e-USA, futhi 12-15 izinsuku zebhizinisi nakwamanye amazwe. Kodwa-ke, kungathatha izinsuku ezingama-20 zebhizinisi ukufika ngokuya ngendawo yakho nokuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukwenza amasiko. Qaphela ngomusa ukuthi isikhathi sokulethwa sizokwehluka ngamaholide noma ukusungulwa koshicilelo olunomkhawulo.
Asinasibopho sokulethwa okuthinteka amasiko, izehlakalo zemvelo, ukudluliselwa kusuka e-USPS kuya kumphathi wendawo ezweni lakho noma iziteleka zezokuhamba zomoya noma zomhlaba, noma ukubambezeleka, noma yiziphi izindleko ezingeziwe, amasiko noma izindleko ezingemuva ezitholwe.
KUBALULEKILE: Yonke imiyalo yethu ithunyelwa ivela eChina futhi asizibophezeli kunoma yiluphi uhlobo lwesifo.
Qaphela i-1: Asinankinga uma iphakethe lingashintshi ngenxa yokulahleka, akuphelele noma akulungile imininingwane yendawo. Sicela ufake imininingwane efanele yokuthumela lapho ubheka. Uma ubona ukuthi wenze iphutha kwimininingwane yakho yokuthumela, nge-imeyili usithumele ngomusa [Email protected] ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Qaphela i-2 : Izwe ngalinye linomkhawulo wentela: inani lapho umuntu eqala ukukhokha izintela entweni engenisiwe. Intela nemisebenzi kuyahlukahluka kuyo yonke into kuwo wonke amazwe futhi kufanele ikhokhwe yikhasimende.
Abathengi bavunyelwe ukwenza ushintsho kuma-oda afakiwe, within 24 amahora ukuthenga kwabo kanye ngaphambi imiyalo igcwalisekile. Izindleko ezengeziwe zizotholwa abathengi nganoma iziphi izinguquko ezenziwe kuma-oda ngemuva 24 amahora ukuthenga kwabo.
Abathengi abavunyelwe ukukhansela ukuthenga kwabo ngemuva kokubekwa kwama-oda.
Kufanele ucele ukubuyiselwa imali ngaphakathi 14 izinsuku zokuthola i-oda lakho.
Inqubo yokubuyisa into:
1. Qiniseka ukuthi ihlangabezana nezindlela zokubuyisa okufanele
2. Sithumele umlayezo ku- [Email protected] okukhombisa inhloso yokubuyisa into. Sicela ufake okulandelayo ku-imeyili:
• Izithombe / ividiyo yento kuye ngento entweni
• Amathegi namalebula anamathiselwe
Sizokuphendula ngosuku lwebhizinisi ngaphakathi 24 amahora futhi sikusize ekuqhubekeni nokubuya kwento ethengiwe.
Uma isicelo sakho sokubuyisa samukelwa, kufanele ubuyisele leyo nto / izinto ngaphakathi 7 izinsuku.
• Sicela uqinisekise ukuthi uma ubuyisa imikhiqizo (imikhiqizo), kufanele ibe sesimweni esifanelekile, esingasetshenziswanga, esingagezwanga futhi esinempahla ukufakwa kwasekuqaleni (uma kusebenza)
• Umthengi unesibopho sokubuyisa izindleko zokuthumela
• Izindleko zangempela zokuthumela ngeke zibuyiselwe imali
Ngokushesha lapho sithola isimo sento esithunyelwe, sizokubuyisela intengo yokuthenga futhi sikwazise nge-imeyili.
UKWAMKELWA ISIQINISEKISO SEZIMALI
Ukubuya kwakho kungavunywa kuphela ngokuya ngezizathu ezilandelayo:
Izizathu zenjongo Kulimale Umkhiqizo ulimele ekulethweni
Inesici Umkhiqizo awusebenzi njengoba kuchaziwe kumakhi womkhiqizi wawo
Into engalungile / engalungile Hhayi umkhiqizo okhishwe ngumthengi (isb. Usayizi ongalungile noma umbala ongalungile)
Izinto ezingekho / izingxenye Izinto ezingekho / izingxenye njengoba kukhonjisiwe kwiphakheji
Ayilungeli * Ikhasimende lithola usayizi obayaliwe kodwa alifanele
Iphutha lewebhusayithi Umkhiqizo awufani nokucaciswa kwewebhusayithi, incazelo, noma isithombe (le nkinga ibangelwa iphutha le-web / misinformation lewebhusayithi)
IMALI Y yethu Yezinsuku ezi-7 IBUYELA EGUARANTEE
Joopzy.com iqinisekisa ukuthi noma iyiphi into ethengiwe kithi izobuyiselwa ngaphakathi 7 izinsuku zebhizinisi, isiqinisekiso sokubuyisela emuva imali.
Uma ufanelekile ukubuyiselwa imali ngokuya ngezizathu zokubuyiselwa kwemali ezichazwe ngenhla, ungacela ukubuyiselwa imali ku- “I-Akhawunti yami> Ama-oda”Noma ungasebenzisa isixhumanisi esinikezwe ngezansi:
Khetha into noma i-oda lonke bese uchofoza ku- “cela ukubuyiselwa imali”Inkinobho. Sazise ukuthi ungathanda ukubuyiselwa imali, ngencazelo ecacile yokuthi kungani ungagculisekile ngokulethwa futhi ulayishe izithombe noma ezinye izinto ezisekelayo. Sifisa ukwazi ukuthi izinto zihambe kuphi noma ukuthi singakuthuthukisa kanjani ukwaneliseka kwamakhasimende kanye nesipiliyoni somsebenzi. Udaba ngalunye luzophenywa ngaphakathi 1-2 izinsuku zebhizinisi. Ngenxa yalokhu, ikhasimende lizothola i-imeyili, uma ikhasimende lilungele ukubuyiselwa imali, khona-ke ukubuyiselwa kwemali kuzokwenzeka ngokuhambisana nenqubomgomo yethu yokubuyisa eshiwo ngezansi.
ISIKHATHI SESIKHATHI SOKUTHOLA ISIQINISEKISO / IMALI YAKHO YOKUQALA
Inketho yokufaka esikhundleni: lapho into sele yenziwe inqubo yokuhlola ikhwalithi, lindela ukwamukela into ngaphakathi 10-15 izinsuku zebhizinisi kusukela ngosuku esithola ngalo umkhondo wolwazi lwento ebuyisiwe.
Inketho yokubuyiselwa kwemali: amakhasimende acele ukubuyiselwa imali angalindela ukuyithola kungakapheli ozimele besikhathi esilandelayo:
Indlela Yokukhokha (ngesikhathi sokuthenga) Inketho Yokubuyisa Imali Isikhathi Sokubuyisa Imali (ukubona inani lesitatimende sakho sasebhange)
Ikhadi lesikweletu / ikhadi le-Debit Ukubuyiselwa Kwekhredithi / kweDebit
PayPal Ukubuyiselwa kwe-Paypal (uma ibhalansi ye-Paypal) Izinsuku zebhizinisi ze-5-7
Ukushintshwa kwesikweletu (uma i-Paypal ixhunyiwe ekhadini lesikweletu) 5 kuya ku-15 izinsuku zebhange
Qaphela: Inani lingabonakala kumjikelezo wakho olandelayo wokukhokha
Ukubuyiselwa emuva kwe-Debit (uma i-Paypal ixhunyiwe ekhadini lokudonswa kwemali) Izinsuku ezi-5 kuya kweziyi-30 zebhange (Kuya ngebhange lakho lokukhipha)